လိင်ဆိုင်ရာယုံကြည်ချက်များ၊ လူငယ်များ၏နားလည်မှုနှင့်အလေ့အကျင့်များအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားစွာဖော်ပြသည့်အကြောင်းအရာများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုစူးစမ်းလေ့လာခြင်း - အရည်အသွေးစစ်တမ်း (၂၀၁၆) - သင်၏ ဦး နှောက်ပေါ်တွင်
ချားလ်စ်ပတေရုသa နှင့် Meyrick, ဂျိန်း, Ph.D ဘွဲ့ကိုa
a စိတ်ပညာဌာန, အင်္ဂလန်၏အနောက်တက္ကသိုလ်။
သက်ဆိုင်ရာစာရေးဆရာ - ဒေါက်တာ Meyrick, အင်္ဂလန်၏အနောက်တက္ကသိုလ်စိတ်ပညာဌာန, Frenchay ကျောင်းပရဝုဏ်, Coldharbour လိန်း, Bristol က BS16 1QY ။ Tel + 44 (0) 117 21 82153 ။ E-mail ကို [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
Key ကိုစကားလုံးမြား: လိင်ဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောပစ္စည်းများ၊ အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းစာပေ၊ ဆယ်ကျော်သက်ယောက်ျားများ၊ အရည်အသွေးဆိုင်ရာသုတေသန၊ သီအိုရီများ၊
သုတေသနလိင်အကဲဆတ်သောပစ္စည်း (SEM) မှထိတွေ့မှုအထူးသဖြင့်အမျိုးသားများပေါ်မြီးကောင်ပေါက်များ၏ယုံကြည်ချက်များ, စိတ်နေသဘောထားနှင့်လုပ်ရပ်များအပေါ်အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများရှိကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ ဤလေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက်မှာယနေ့လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာယုံကြည်ချက်, နားလည်မှုများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်ရွယ်ယောက်ျား၏အပြုအမူအပေါ် SEM မှထိတွေ့မှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုစူးစမ်းခြင်းနှင့်ဗြိတိန်စာပေ၌ဤကွာဟချက်ကိုလှည့်ပတ်သီအိုရီတည်ဆောက်ရန်စတင်ဖြစ်ခဲ့သည်။
between18 အသက်ယောက်ျား၏သင်တန်းသားများကိုတစ်ဦးအခွင့်အရေးယူနမူနာ - 25 တဦးတည်းအလုပ်ခွင် (ခေါ်ဆိုမှုစင်တာ, Bristol, ဗြိတိန်) အတွင်းစုဆောင်းခဲ့ကြသည်။ 40 ၏ 11 တစ်ဦးအရည်အသွေးစစ်တမ်းမှတုန့်ပြန်, ဖိတ်ခေါ်ခဲ့သည်။ ဒေတာများ (အွန်လိုင်းနှင့်စက္ကူပုံစံ) စုဆောင်း themes များအဘို့ဆန်းစစ်ခဲ့သည်။
တွေ့ရှိချက်များအရ SEM ပတ် ၀ န်းကျင်၏အဓိကအကြောင်းအရာများမှာဆယ်ကျော်သက်ယောက်ျားများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာယုံကြည်မှုများ၊ နားလည်မှုနှင့်အပြုအမူများကိုလွှမ်းမိုးသည်။နေရာတိုင်းကိုသင်ကြည့်ရှုလော့) (မြီးကောင်ပေါက်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားများနှင့်အပြုအမူအပေါ်အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများရှိခြင်းကြောင့်ဒီလေ့လာမှုမှာလူပျိုတို့မြင်နေကြတယ်အဲဒါမကောင်းဘူး) ။ မိသားစုသို့မဟုတ်လိင်ပညာရေး (မြင်၏ကိုယ်စားအချို့ '' ကာကွယ်စောင့်ရှောက် 'သို့မဟုတ်ချိန်ခွင်ကိုပူဇော်စေခြင်းငှါBuffer), လူငယ်များ SEM အတွက်ကြည့်ရှုပါ။ ဒေတာများ (ပဋိပက္ခဖြစ်သို့မဟုတ်ရှုပ်ထွေးအမြင်များအကြံပြုရီးရဲလ်ကျမ်းပိုဒ် Fantasy) ကျန်းမာလိင်အသက်တာ၏မြီးကောင်ပေါက် '' မျှော်မှန်းချက်န်းကျင် (ကျန်းမာတဲ့လိင်ဘဝ) နှင့်သင့်လျော်သောယုံကြည်ချက်နှင့်အပြုအမူ (ညာဘက်မှားကနေသိမှတ်ကြလော့) ။ အကြောင်းအရာများအားကျိုးကြောင်းဆက်နွယ်သောလမ်းကြောင်းတစ်ခုသို့ထည့်သွင်းခြင်းကသီအိုရီတည်ဆောက်ရန်ကူညီသည်။
keywords: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားစွာပစ္စည်း, ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်အထီး, ယုံကြည်ချက်, နားလည်မှု, အပြုအမူ, အရည်အသွေးသုတေသန။
စားသုံးမှုကိုမှန်ကန်လိင်၏မျှော်လင့်ချက်များအခြေပြုရှုပ်ထွေးမှုများနှင့် SEM တန်ဖိုးများကိုဦးတည်သွားစေနိုင်ပါတယ်။
ဒီကိုထိခိုက်အတွက်အပြောင်းအလဲ '' ကြားခံ '' ၏လက်ရှိအားနည်းချက်သို့မဟုတ်အတွေ့အကြုံကိုကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများ (၁) အထူးသဖြင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ပလက်ဖောင်းများ (၂.၃,1) မှတဆင့်ရရှိမှုတိုးပွားလာခြင်းကြောင့်အချို့သောအသုံးအနှုန်းများသည်ညစ်ညမ်းသောကမ္ဘာ (၅) ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ သုတေသနသည်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်လူငယ်ယဉ်ကျေးမှုကိုမကြုံစဖူးသောနည်းများဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုစတင်ခဲ့သည် (2,3,4)
McNair, 2002 (8) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်း (SEM) ၏ပုံမှန်နှင့် mainstream သာလူငယ်များရဲ့ဘဝတွေကိုဆက်ဆံရေးနှင့်သူတို့ကဆွေးနွေးဖို့အရာမှာငြိမ်ဝပ်အတွက်, ဒါပေမယ့်လည်းလူကြိုက်များတဲ့ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ခေတ်ပြိုင်ညစ်ညမ်းကစားအခန်းကဏ္ဍအားဖြင့်ပြသသည်မဟုတ်ကြောင်းဆိုပါတယ် အနုပညာ။
ခေတ်သစ်အင်တာနက်-enabled နည်းပညာ၏ခွဲခြားသတ်မှတ်မှုမရှိသဘာဝအားလုံးအသက်အရွယ်အုပ်စုများအတွက် (1) SEM မှထိတွေ့မှုတိုးလာပေမယ့်အထူးသဖြင့်လူငယ်များဖြစ်စေမတော်တဆသို့မဟုတ်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ (9, 10) တွင်ခဲ့သည်။ လူမှုမီဒီယာမှတဆင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသဘာဝတရား၏လိင်အကဲဆတ်သောအကြောင်းအရာ၏ဖန်ဆင်းခြင်းနှင့်ဖြန့်ဖြူးအတွက်ပါဝင်မှုအဆင့် CITES (11) ကိုလည်းတိုးမြှင့်ခဲ့သည်။
SEM စားသုံးမှုအဆင့်ကိုသုတေသနပြုချက်အရဖြစ်နိုင်ချေရှိသောဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများမှာလိင်အကြမ်းဖက်မှုကိုအားပေးခြင်း (၁၂)၊ အမျိုးသမီးများအားရည်ညွှန်းခြင်း (၁၃)၊ အစောပိုင်းလိင်ပွဲ ဦး ထွက် (၁၄၊ ၁၅၊ ၁၆)၊ အန္တရာယ်ရှိသောလိင်အပြုအမူ (၁၇) နှင့်လိင်စော်ကားမှုတို့ပါဝင်သည် (12) ။ သို့သော် Luder et al ။ ၂၀၁၀ (၁၈) သည်ဆွစ်လူငယ်များကို အသုံးပြု၍ (N = 13) SEM ထိတွေ့မှုနှင့်အန္တရာယ်များသောလိင်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူများအကြားဆက်နွယ်မှုကိုမတွေ့ရပါ။ သို့သော်ဤပုံစံသည် US ရှိအကြီးစား (N = 14) အလုပ်မှတွေ့ရှိသည့်အတိုင်းအားနည်းသောလူ ဦး ရေအတွက်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်။ (၁၉) ယောက်ျားအများစုတွင် SEM မကြာခဏထိတွေ့ခြင်းနှင့်ပိုမိုမြင့်မားသောဆက်စပ်မှုမရှိကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်ဆီသို့ ဦး တည်သဘောထား။ သို့သော် SEM ကိုမကြာခဏရှာဖွေလေ့ရှိသည့်လိင်ကျူးကျော်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ အန္တရာယ်နိမ့်ကျသောသူများအကြားသူတို့၏ရွယ်တူချင်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်မှုအဆင့်များသည်လေးဆပိုကြီးသည်သို့မဟုတ်ထိုထက်များကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။ ထိတွေ့မှုနှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများအပြန်အလှန်ဆက်စပ်မှုသည် ပိုမို၍ စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်လိုအပ်ပြီး ပို၍ အရေးကြီးသည်မှာသီအိုရီတည်ဆောက်မှုဆိုင်ရာချဉ်းကပ်မှုဖြစ်သည်။
ဤမြေကွက်၌သီအိုရီဖှံ့ဖွိုးတိုး (20) ချို့တဲ့နေပါတယ်။ cross section လေ့လာမှုများမြီးကောင်ပေါက် SEM (14,21) ၏လေ့လာရေးအနေဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုလေ့လာသင်ယူပြုပါကြောင်းအကြံပြုနှင့်ဤလိင်၏ပုံမှန်မဟုတ်ဘဲစူးနေတယ်မျှော်လင့်ချက်များ (22) တွင်ဖြစ်ပေါ်စေခြင်းငှါပါပြီ။ ပေတရုနှင့် Valkenburg, 2010 (23) ကအစစ်အမှန်ကမ္ဘာလိင် (လူမှုရေးသရုပ်မှန်) နှင့်လိင် (utility ကို) အကြောင်းကိုအချက်အလက်များ၏အသုံးဝင်သောအရင်းအမြစ်ဆင်တူခဲ့ကြောင်းတိုးမြှင့်ယုံကြည်ချက်အတွက်ရလဒ်ကပိုမကြာခဏ SEM ထိတွေ့တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
SEM ၏အကာအကွယ်ပေးသောလိင်ပညာရေး၏ဖြစ်နိုင်ချေအခန်းကဏ္evကိုသက်သေပြသည်။ (၂၄) SEM ၏အလားအလာကောင်းသည့်ဆိုးကျိုးများနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်ပညာရေးမရှိခြင်းသည်မြင့်မားသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများနှုန်းနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိသည်ဟုမီးမောင်းထိုးပြခဲ့သည်။
Hald နှင့် Malamuth, 2008 (25) ကကောက်ယူလေ့လာမှုတစ်ခုကမီဒီယာစာတတ်မြောက်ရေးကိုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်လူငယ်များ၏ညစ်ညမ်းပစ္စည်းများ၏အရေးပါအနက်အတွက်အထောက်အကူပြုလိမ့်မယ်လို့အကြောင်းအရာထဲဆွဲသွင်းပါဝင် Championing, ညစ်ညမ်းပတ်သတ်ပြီးနှင့်အတူလိင်ပညာရေးအတှကျနညျးလမျးကိုသိရှိနိုင်ဖို့ကူညီပေးခဲ့သည်။
သို့သော်အရည်အသွေးအရ (၇) အလုပ်ကလူငယ်များသည် SEM ၏လက်တွေ့မကျသောသဘောသဘာဝကိုအသိအမှတ်ပြုကြောင်းအသိအမှတ်ပြုပြီးဆယ်ကျော်သက်အရွယ်အတွေ့အကြုံနှင့်နားလည်မှု၏ရှုပ်ထွေးမှုကိုထပ်မံညွှန်ပြခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့သောနက်ရှိုင်းသောအလုပ်စာပေများတွင်ကျဲသော်လည်းသီအိုရီကျပန်းလမ်းကြောင်းနှစ်ခုလုံးကိုနားလည်ရန်နှင့်ကြား ၀ င်စွက်ဖက်မှုနည်းလမ်းများကိုစူးစမ်းရန် SEM အတွေ့အကြုံကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာအကဲဖြတ်ရန်လိုအပ်သည်။ ထို့အပြင်ဗြိတိန်အခြေစိုက်ဥရောပတွင်ကျယ်ပြန့်သောလွှမ်းမိုးထားသောစာပေများတွင်သုတေသနပြုမှုကင်းမဲ့ခြင်းသည်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုအတွေ့အကြုံများကိုဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။
ဤသုတေသန၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ SEM မှထိတွေ့မှုသီအိုရီအဆောက်အဦးဆီသို့တစ်ဦးပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းအဖြစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာယုံကြည်ချက်, နားလည်မှုနှင့်၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်အကောင့်မှတဆင့်လူပျို၏အလေ့အကျင့်ပေါ်မှာရှိပြီးသောသက်ရောက်မှုကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်ထို့ကြောင့်ဖြစ်ခဲ့သည်။
သီအိုရီတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်ရှုပ်ထွေးစူးစမ်း, အရည်အသွေးဒေတာစုဆောင်းမှု၏ရွေးချယ်ရေးဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်အရည်အသွေးလေ့လာမှုများပတ်လည်ရှိစာပေအတွက်ကွာဟချက်။ ကြောင့်ခေါင်းစဉ်၏သဘောသဘာဝရန်, စစ်တမ်းတစ်ခု tool ကိုပါဝင်သူ anonymity ကိုသေချာစေရန်နှင့်လူမှုရေးလိုလားလျှော့ချရန်ရွေးချယ်ခဲ့သည်။
ဒေတာရွှဲ (26) အထိရောက်ရှိခဲ့သည်ခဲ့သည်သည်အထိတစ်အခွင့်အရေးယူ, snowball နမူနာနည်းဗျူဟာကိုသုံးပြီး, အသိအကျွမ်းတည်ဆဲသင်တန်းသားများအားဖြင့်စုဆောင်းခဲ့ကြသည်။ တဆယ်ရှစ်နှစ်ဆယ်ငါးနှစ်ရှိသော်နှစ်ကြားယောက်ျား, ဒီလေ့လာမှုတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်ဖိတ်ခေါ်လျက်, 40 ၏ဖိတ်ခေါ် 11 ပါဝင်သူ (နောက်ဆက်တွဲတစ်ဦးကိုကြည့်ပါ) ကိုစစ်တမ်းကောက်ယူပြီးမြောက်ခဲ့သည်။
အင်္ဂလန်အနောက်ဘက်ရှိကျန်းမာရေးနှင့်ဘဝသိပ္ပံဘုတ်အဖွဲ့သည်ဤလေ့လာမှုအတွက်ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာအတည်ပြုချက်ကိုပေးခဲ့သည်။ သင်တန်းသားများကိုအရည်အသွေးစစ်တမ်း၏ hard copy (အမည်မသိစာအိတ်မှတဆင့်ပြန်လာသော) သို့မဟုတ်အွန်လိုင်းဗားရှင်း (အီးမေးလ်ကနေပြန်လာ) ဖြစ်စေပြီးစီးခဲ့သည်။
ဒေတာကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရှာဖွေနေနှင့်အဓိကအကြောင်းအရာများဖော်ထုတ်မတိုင်မီ (နောက်ဆက်တွဲ B ကိုကြည့်ပါ) ကနဦး codes တွေကိုထုတ်လုပ်မှတဆင့်အချက်အလက်များ၏ semantic တန်ဖိုးကိုရှာဖွေစူးစမ်း, အကြောင်းအရာအလိုက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ (27) inductive တစ်ဦးခြောက်အဆင့်ချဉ်းကပ်မှုမှတဆင့်ထွက်သယ်ဆောင်ခဲ့သည်။ အနက်ညှဉ်းဆဲခြင်းကို themes များ (28) ၏သုတေသနပညာရှင်များနှင့်ကြီးကြပ်ရေးမှူးအတည်ပြုချက်ကိုအားဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကြေညာချက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်မှတဆင့်ထားသည်ခဲ့သည်။
သင်တန်းသားများကိုအားလုံးအတူတူပင် Bristol ကကိုအခြေခံပြီးအလုပ်ခွင်မှာအလုပ်လုပ် 11-18 နှစ်ပေါင်းနှစ်ကြား 25 အထီးပါဝင်သည်။ သူတို့ကအမည်မဖော်များအတွက်ကလောင်အမည်ပေးထားပါပြီ။
ဤအရည်အသွေးဆိုင်ရာစစ်တမ်းများတွင်အသုံးဝင်သောအကြောင်းအရာအလိုက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းသည်အချက်အလက်များအတွင်း၌အဓိကအကြောင်းအရာခြောက်ခုကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ပါဝင်သူများအားလုံး၏ယုံကြည်မှုများ၊ နားလည်မှုများနှင့်လုပ်ရပ်များကိုဆုံးဖြတ်ရာတွင်ဤအကြောင်းအရာများသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ ခေါင်းစဉ်များကိုတံဆိပ်ကပ်ထားပြီး“ နေရာတိုင်းကြည့်ရှုခြင်း”၊ “ သိပ်မကောင်းဘူး”၊ “ Buffers၊ လိင်ပညာရေးနှင့်မိသားစု”၊ “ Fantasy အစစ်အမှန်အခန်းကဏ္,”၊ “ Healthy Sex Life Life” နှင့်“ Wrong Right from Wrong from the Wrong Right?” ခေါင်းစဉ်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ ” ။ အဓိကအကြောင်းအရာများသည်တစ်ကမ္ဘာလုံးရှိကျယ်ပြန့်သောအကြောင်းအရာကိုဆက်သွယ်နိုင်ရန်ဤသတ်သတ်မှတ်မှတ်အစီအစဉ်တွင်တင်ပြထားခြင်းဖြစ်သည်။
key ကို themes များနှင့်ခွဲ themes များ၏ပုံကြမ်း
မေတ္တာ, ယုံကြည်မှု, ရိုးသားမှု, လေးစားမှု
1 ။ နေရာတိုင်းကိုသင်ကြည့်ရှုလော့
ဒီအပြင်အဆင်သင်တန်းသားများအားဖြင့်ဖော်ပြခဲ့သည် SEM မှထိတွေ့မှု၏ပုံစံများအားဖြင့်သတ်မှတ်ပါတယ်နှင့်ဤအကြောင်းအရာအများဆုံးကိုးကားအရင်းအမြစ်အဖြစ်အင်တာနက်နှင့်အတူဝင်ရောက်ခံရဖို့ပုံရသည်ရာမှတဆင့်လွယ်ကူခြင်းနှင့် range သက်သေအထောက်အထားဖြစ်ပါတယ်။
"ငါသည်အဓိကအားဖြင့်ကျနော်အင်တာနက်ပေါ်မှာအခမဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်များကနေရယူကြောင်းခက်ခဲ-Core porn မြင်ကြပြီ" - Sid
"စာမျက်နှာ 3, သူငယ် mags (တိရစ္ဆာန်ရုံ & အခွံမာသီး)" - တွမ်
"သင်တက်မခေါ်ဘယ်မှာအကဲဆတ်သောဂီတဗီဒီယို, တီဗီမိန်းကလေးငယ်များ" - ရစ်ချက်
"Instagram ကို" - မို
သင်တန်းသားများကိုတစ်ဦးဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ်အပြုအမူကိုမြင်လျှင်, ခေတ်သစ်ကမ္ဘာကြီးထဲမှာဆယ်ကျော်သက်ယောက်ျားလေးအားဖြင့် SEM ရဲ့ကြည့်ရှုဘို့လူမှုရေးလက်ခံမှုတစ်ဦးအတိုင်းအရှည်ကိုသရုပ်ပြပုံရသည်။
သို့သော်အချို့ဆယ်ကျော်သက်ယောက်ျားလေးအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ experimentationand စွဲလမ်းအပြုအမူတွေကိုလွှမ်းမိုး, အလားအလာထိခိုက်ရလဒ်များကိုအသိအမှတ်ပြုရန်သလိုပဲ။
ညစ်ညမ်းမှုကြောင့်လိင်တူချစ်သူများကိုလိင်တူချစ်သူများကိုလိင်တူချစ်သူအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုခြင်းဟာလိင်တူချစ်သူတွေအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်နစ်နာမှုတွေဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ - Gaz
“ ကျွန်တော်ဂရုမစိုက်တဲ့အချိန်မှာအလွယ်တကူကိုင်တွယ်နိုင်ဖို့နဲ့ငါ့ ဦး နှောက်ထဲကဓာတုပစ္စည်းတွေကနေရရှိတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကြောင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ကိုစွဲစွဲလမ်းလမ်းတွေ့လာတယ်။ - Alfie
လူမှုရေးမီဒီယာနှင့်အမှန်တကယ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုအကြားတစ်ဦးက link ကိုလည်းစိုးရိမ်ပူပန်မှုများကြောင့်လူအွန်လိုင်းသူတို့ကိုယ်သူတို့ပုံဖော်မည်သို့မည်ပုံ၏ရိုးသားမှု၌ခိုလှုံနိုင်စွမ်းစပ်လျဉ်းထမြောက်တော်မူခံရအတူဆက်သွယ်ခဲ့ပါတယ်, ဒီအသစ်များဖြစ်ရပ်ဆန်းလာမယ့်ဆောင်ပုဒ်မှာကြီးပြင်းနေပါတယ်။
SEM အကြောင်းအရာအတွက်ပုံဖော်အမြင်နှင့်သဘောထားသင်တန်းသားများအားဖြင့်ဖန်ဆင်းတော်မှတ်ချက်များအတွက်ပုံတူကူးယူခံရဖို့သလိုပဲ။ အခြို့သောအသိအမြင်သည်သူ၏ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်အံ့သောငှါ, အစီရင်ခံနှင့်အတူကျားအပေါ်မှအောက်သို့ဆင်းနှင့်အမျိုးသမီး၏ objectification, တလျှောက်လုံးအထူးသဖြင့်စည်းဝေးကြ၏။
ကျားမအဆင့်ဆင့်၏အန္တရာယ်ရှိသောအတွေးအခေါ်များကိုပိုမိုအားဖြည့်ပေးလိမ့်မည်ဟုလည်းငါပြောခဲ့သည်။ အမျိုးသမီးများသည်များသောအားဖြင့်လက်အောက်ခံခြင်းနှင့်ယောက်ျားများ၏လွှမ်းမိုးမှုအောက်တွင်ရှိသည်။ အမျိုးသားများသည်များသောအားဖြင့်ထိန်းချုပ်သူများအဖြစ်နှင့်ပိုမိုအားကောင်းသည့်ကျားမအဖြစ်ပုံဖော်လေ့ရှိသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းရှိလွယ်ကူစွာထိခိုက်နိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်များအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိသည်ဟုယုံကြည်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့၏လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းရှိဘိုးဘေးအုပ်စိုးမှုကိုအားဖြည့်ပေးခြင်း၊
“ လိင်ကိုအလွယ်တကူ ၀ ယ်ယူပြီးဝယ်ယူနိုင်တဲ့ထုတ်ကုန်တစ်ခုအဖြစ်လိင်။ အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသမီးများအပေါ်ရှုမြင်ပုံ၊ ခွဲခြားသတ်မှတ်ချက်၊ မိန်းကလေးများကိုလူများကဲ့သို့မဟုတ်ကြောင်းပြောင်းလဲခြင်း” - Mo
ဒီအုပ်စု, SEM မှာပြထားတဲ့ကျား, မကျပုံစံကိုလည်းငယ်ရွယ်အထီးသူတို့ကိုယ်သူတို့ရိပ်မိသောလမျးဖြစ်ပေါ်လာအောင်ပုံရသည်။
အချို့ယောက်ျားများသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းရည်နှင့် ပတ်သက်၍ မလုံခြုံမှုကိုခံစားရစေနိုင်သည်။ - ရစ်ချတ်
"porn ကငါ့ကိုလူတစ်ယောက်လိုလုံလောက်မှုမရှိစေတဲ့အပြင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုအပေါ်လည်းမကောင်းသောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။ " - Tom
ထို့အပြင်ခုနှစ်, သင်တန်းသားများကို SEM အကြောင်းအရာအွန်လိုင်းအတွင်းစှနျး၏အစဉ်အဆက်ကိုတိုးမြှင့်အဆင့်ဆင့်တွေအကြောင်းပြောခဲ့တယ်။ SEM ထို့ကြောင့်တစ်မြီးကောင်ပေါက်ဝိညာဏ်၏ထည်သို့ပိုပြီးအစွန်းရောက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဦးစားပေး၏တန်ဆာတစ်ခုသြဇာအင်အားအဖြစ်ရှုမြင်နိုင်ပါတယ်။
“ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများတိုးများလာတာကြောင့်ဗွီဒီယိုများဟာစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းနေဆဲဟုဝယ်လိုအားနှင့်အတူတက်နေရန်အတွက်ဗွီဒီယိုများသည်ပိုပိုပြီးစွန့်စားခန်းဖြစ်လာသည်။ - ဂျေး
"ဒါဟာငါ့ကိုဖြစ်ကောင်းတင်းကျပ်စေတော်မူပြီ အခုကျွန်တော့်ကိုထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ဖို့ကောင်းတယ်၊ ငါမြင်ခဲ့တဲ့ပမာဏကငါ့ဘဝကငါ့ကိုမထိခိုက်စေဘူးလို့” - တွမ်
မြင့်မားသောလှုံ့ဆော်မှုလိုအပ်မှုမြင့်တက်လာခြင်းကြောင့်တစ် ဦး တစ်ယောက်၏လိင်ကြင်ဖော်ဘက်ပါ ၀ င်ရန်နှင့်တစ် ဦး ချင်းအနေဖြင့် 'စံ' တစ်ခုအဖြစ်မှတ်ယူရမည့်အရာများကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန်မျှော်လင့်ချက်အဆင့်ကိုအကျိုးသက်ရောက်စေနိုင်သည်
3 ။ Buffer
"ကျောင်းမှာအကြှနျုပျ၏လိင်ပညာရေးကြောက်မက်ဘွယ်သောဖြစ်ခဲ့သည်။ ညစ်ညမ်းအားလုံးမှာဖုံးလွှမ်းသူတို့ရှင်းလင်းသောနိမ့်ဆုံးလုပ်နေတာခဲ့ကြသည်တူသောကြောင့်သလိုပဲမခံခဲ့ရ ... ။ ဂျေး - သူတို့ကအမှန်တကယ်လိင်တက်ကြွဖြစ်ခြင်းအမှန်တကယ် "ကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုအဘယျသို့အတွက်သင်တစ်ဦးအသုံးဝင်သောထိုးထွင်းသိမြင်မှုပေးလိမ့်မယ်လို့မဆိုအသေးစိတျကူးအစည်းအဝေးများတွင်
“ ကျွန်တော်ကြီးပြင်းလာတဲ့အချိန်မှာလူ့ပုံစံဟာကျွန်တော့်မိသားစုမှာမညီမညာဖြစ်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး၊ ဒါကြောင့်ဒီဟာကကျွန်တော့်အတွက်အားသာချက်တစ်ခုပဲ။ ကျွန်တော့်အမေရဲ့အနုပညာလက်ရာကကျွန်တော့်ကိုတကယ်စစ်မှန်တဲ့အမျိုးသမီးတွေဘယ်လိုပုံမျိုးလဲဆိုတာကောင်းကောင်းသိတယ်” - Bob
SEM ကြည့်ခြင်းနှင့်လိင်ပညာရေးတို့၏ဆိုးကျိုးများကိုဆန့်ကျင်သောမိသားစုသည်ကျန်းမာရေးကိုဟန်ချက်ညီစေသောစံချိန်စံညွှန်းများပေးသည့်အခွင့်အလမ်းတစ်ခုအဖြစ်လုပ်သည်။ ထိုကဲ့သို့သော 'ကြားခံ' ၏လုပ်ဆောင်မှုသည်မြီးကောင်ပေါက်များကိုအမှန်တကယ်နှင့်စိတ်ကူးယဉ်လိင်အပြုအမူကိုခွဲခြားရန်ကူညီခြင်းဖြစ်သည်။
4 ။ ရီးရဲလ်ကျမ်းပိုဒ် Fantasy
သင်တန်းသားများကိုဆက်ဆံရေးအတွင်းပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ဆှေးနှေးခဲ့ကြောင်းအသက်တာ၏ပုံမှန်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်နှင့် ပတ်သက်. ယခုအများကြီးလျော့နည်းရဲ့သားကောင်အဖြစ်ညစ်ညမ်း၏အသုံးပြုမှုကိုကြည့်ရှုသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
"ဒါဟာအခုပုံမှန်ဖြစ်ပါတယ်။ တစ် ဦး မညီကြောင်း၏လျော့နည်း။ ဒါဟာမိတ်ဖက်များနှင့်အတူအကြောင်းပြောဆိုနိုင်ပါတယ်။ - Tom
ဒါကပုံမှန်အမျိုးမျိုးအချက်အလက်များ၏ '' ယုံကြည်စိတ်ချ '' ပညာရေးအရင်းအမြစ်အဖြစ်ကိုယ်စားပြုပေမယ့်အချို့သင်တန်းသားများကို SEM '' စံချိန်စံညွှန်း '' တစ်ဦးဟာအပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုကဖော်ပြခဲ့သည်။ ခံခဲ့ရပါတယ်
“ ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်အနေနဲ့ငါမျှော်လင့်ထားတဲ့အရာကနေတုန်လှုပ်ချောက်ချားခြင်းကနေကျွန်တော်အများကြီးလေ့လာသင်ယူခဲ့တယ်။ ” - Tom
လိင်မှုကိစ္စနှင့်ပတ်သက်သောအကြောင်းအရာများကိုလူငယ်များအားအလွန်အန္တရာယ်ရှိသောအကြံဥာဏ်ပေးသည်ဟုကျွန်ုပ်ပြောလိမ့်မည်။ - Bob
"ဒါကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပုံရိပ်နဲ့တစ်ယောက်ယောက်ကိုဘယ်လိုကြည့်သင့်တယ်၊ လိင်ဘယ်လိုဆက်ဆံသင့်တယ်ဆိုတာကိုကျနော့်အမြင်ကိုလည်းအကျိုးသက်ရောက်တယ်" - ဟယ်ရီ
"ဒီရှင်းလင်းပြတ်သားစွာသောပစ္စည်းများသည်ကျွန်ုပ်၏လူ့ပုံသဏ္perspectiveာန်အပေါ်များစွာအကျိုးသက်ရောက်မှုနည်းသည်။ ၎င်းသည်အဓိကအားဖြင့်၎င်းသည်စိတ်ကူးယဉ်ကမ္ဘာကိုပုံဖော်ထားခြင်းဖြစ်သည်ဟူသောအချက်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ - Bob
SEM ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်လိင်ဆိုင်ရာမျှော်လင့်ချက်များနှင့် ပတ်သတ်၍ ရှုပ်ထွေးမှုများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ဤအုပ်စုတွင်၎င်းသည်လိင်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူအားကိုယ်စားပြုခြင်းရှိ၊ မရှိကိုနားလည်မှုသို့မဟုတ်ထိုးထွင်းသိမြင်မှုအဆင့်အမျိုးမျိုးကိုတင်ပြခဲ့သည်။
5 ။ ကျန်းမာတဲ့လိင်ဘဝ
ကျန်းမာကြံ့ခိုင်သောဘ ၀ မည်သို့ရှိနိုင်သည်ကိုသင်တန်းသားများကိုမေးမြန်းခဲ့သည်။ ကျန်းမာရေးလိင်ဘဝကိုဖော်ပြသည့်အခါကြိမ်နှုန်းနှင့်အရည်အသွေးသည်ဒေတာအချက်အလက်များ၏ဘုံကဏ္threadsများဖြစ်သည်။
“ သင်နှင့်လိင်တူတူဆက်ဆံသည့်သူနှင့်မကြာခဏကျေနပ်ခြင်း” - ဂျေး
"ဟုအဆိုပါအိပ်ခန်းထဲမှာစွန့်စားဖြစ်ခြင်းနှင့်မှန်မှန်လိင်ဆက်ဆံ" - ရစ်ချက်
လိင်ဆက်ဆံခြင်းသည်အဓိကအားဖြင့်ဆက်သွယ်ခြင်းသည်လိင်မှုကိစ္စပြုခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများသည်အဖော်များ၏ဆန္ဒကိုရောင်ပြန်ဟပ်ခြင်းမရှိသောအပျော်အပါးကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့်နည်းလမ်းများကိုမကြာခဏသင်ကြားပေးသည်။ - ဟယ်ရီ
“ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုမှာပါ ၀ င်တဲ့ကတိက ၀ တ်ပြုထားခြင်းသို့မဟုတ်သင်မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းရိုးသားခြင်း။ မင်းကအခြားလိင်ကိုကောင်းကောင်းလေးစားတယ်ဆိုတာပြတယ်။ ” - ရော့စ်
“ စိတ်လှုပ်ရှားစရာတွယ်တာမှုရှိရင်အဓိပ္ပာယ်မဲ့လိင်ကိုငါမေ့သွားတယ်” - Tom
ဆက်သွယ်ရေး, ရိုးသားမှု, လေးစားမှု, စိတ်ခံစားမှု attachment များကိုများအတွက်လိုအပ်ချက်အားလုံး SEM တွင်ဖော်ပြပါရှိသည်ဤအခြင်းနှင့်လိင်အကြားကျန်းမာလိင် life.The ကွာဟမှုဖော်ပြ reportedin နေကြတယ်, သောဤအုပ်စုတွင်လူပျိုတို့ကဒီမတူညီသို့ထိုးထွင်းသိမြင်မှုသရုပ်ပြဖို့ဒီဂရီရှင်းပါတယ်။
6 ။ မှားကနေညာဘက်ကိုသိရှိ?
အဆိုပါဒေတာစပ်လျဉ်းအမျိုးသမီးမြောက်မြားစွာဆန့်ကျင်ခြင်းနှင့်ထောင်ချီအမြင်များ၏ဥပမာများနှင့်ထင်မြင်ချက်များပေး, ကျား, မကျပုံစံရှင်းရှင်းလင်းလင်းထိုးထွင်းသိမြင်မှု၏ကွဲပြားဒီဂရီနှင့်အတူသက်သေရှိပါသည်။
"လိင်အချို့ရှုထောင့်မှငါ့ကို desensitised ကြပါစို့။ ငါငါ့အပေါ်မှာမဆိုအနုတ်လက္ခဏာသက်ရောက်မှုရှိခဲ့ပါတယ်ကြောင့်ငါကြည့်ရှုအားပေးသို့မဟုတ်ပုံမှန် "ပေါ်တွင်အမြင်ပြုကြပြီတစ်ခုခုမဖြစ်မခံစားရဘူး။ -Ross
“ အမျိုးသမီးတွေဟာကင်မရာရှေ့မှာအမျိုးသမီးတွေပြည့်တန်ဆာလုပ်တာကိုမြင်ရတာကျားမမညီမျှမှုဖြစ်နိုင်တယ်။ - Alfie
“ ယောက်ျားတစ်ယောက်သည်ရေရှည်တည်တံ့သောလိင်မှုဘ ၀ အတွက်အခွင့်အရေးရှိလိုလျှင်ဝန်ကိုမ ၀ တ်ဘဲသူသည်မိမိ၏အမျိုးသမီးများစိတ်ကျေနပ်မှုရှိစေရန်အချိန်ယူသင့်သည်” - Alfie
အမျိုးသမီး၏ objectification ဖုံးလွှမ်းနေတာကိုကြမ်းတမ်းအပြုအမူတို့၏ပေါ်ထွန်းခြင်းကိုလည်းသတိအဆင့်တွင်ပြသခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
“ ယောက်ျားတွေကသူတို့ရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာစံနှုန်းတွေကိုအမျိုးသမီးတွေသူငယ်ချင်းတွေကြားမှာပြက်ရယ်ပြုတဲ့အထိလျှော့ချလိုက်တဲ့အခါအဲဒါကကျနော့်အမြင်မှာအလွဲသုံးစားမှုပဲ။ (ကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းများအတွက်ကောင်းသောပုံပြင်တစ်ပုဒ်အတွက်အကြွင်းမဲ့ဆံပင်ကောက်ကောက်အချို့ကိုကျွန်ုပ်ရောင်းလိုက်သည်။ ၎င်းသည်လက်မခံနိုင်ပါ) - Gaz
ရလဒ်များအရ SEM စားသုံးမှုသည်လူငယ်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာယုံကြည်မှုများ၊ နားလည်မှုနှင့်အလေ့အကျင့်များအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်ပတ်သက်သောအရေးကြီးသောတွေ့ရှိချက်အချို့ကိုမီးမောင်းထိုးပြသည်။ အရည်အသွေးနှင့်ထို့ကြောင့်ယေဘုယျအားဖြင့်မဟုတ်သောနမူနာများ၏ကန့်သတ်ချက်များအတွင်းတွင်အကြောင်းအရာများသည်နမူနာကြီးမားသောအတည်ပြုချက်မှအကျိုးဖြစ်ထွန်းမည်ဖြစ်သော်လည်း SEM ၏သဘောထားများနှင့်အပြုအမူများကိုမည်သို့ပုံဖော်နိုင်သည်ကိုသီအိုရီအရစတင်ခြင်းတွင်အထောက်အကူပြုလိမ့်မည်။ ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်များအနေဖြင့် SEM ပါ ၀ င်သည့်အကြောင်းအရာကိုစိတ်မသက်မသာဖြစ်စေသည်ဟုဖော်ပြသောအစွန်းရောက်အကြောင်းအရာများအပါအ ၀ င်အခြားသုတေသနပြုခြင်း (2,3,4,16,10) ။
ဤလေ့လာမှုမှလူငယ်များသည်ဆယ်ကျော်သက်များ၏လိင်စိတ်နှင့်အပြုအမူများအပေါ်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်ကြောင်းအသိအမှတ်ပြုသည်။ မိသားစုသို့မဟုတ်လိင်ပညာရေးသည် SEM ၏ကိုယ်စားပြုမှုကို 'ကာကွယ်မှု' သို့မဟုတ်ဟန်ချက်ညီစေနိုင်သည်။ အချက်အလက်များအရမြီးကောင်ပေါက်များ၏ကျန်းမာသောလိင်ဘဝနှင့်သင့်လျော်သောယုံကြည်မှုများနှင့်အပြုအမူများနှင့်ပတ်သက်သောပconflictိပက္ခဖြစ်မှုသို့မဟုတ်ရှုပ်ထွေးသောအမြင်များကိုဖော်ပြသည်။ SEM တန်ဖိုးများကိုလက်ခံထားသောပုံစံသည်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ 'buffers' ၏အတွေ့အကြုံသည် SEM အားသတင်းအချက်အလက်ရင်းမြစ်တစ်ခုအနေဖြင့်အားနည်းချက်ကိုဖျန်ဖြေပေးနိုင်သည်။
တိုးချဲ့နိုင်မှုသည် SEM ကိုခေတ်သစ်ခေတ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်လူမှုရေးလက်ခံမှုကိုတိုးမြှင့်စေနိုင်သည် (၂၉၊ ၅၊ ၁) ။ ဒေတာအချက်အလက်များအရ SEM လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစံနှုန်းများကိုစိတ်ရှုပ်ထွေးစေပြီးလက်တွေ့မကျသည့်မျှော်လင့်ချက်များသို့ပို့ဆောင်ပေးသည်။ သို့သော် SEM ကို“ အမှန်တကယ်” အဖြစ်သဘောထားသည်။ သုတေသနတွင်ယခင်တွေ့ရှိခဲ့သောအပြောင်းအလဲသည်အားနည်းချက်အချို့ (၃၀) နှင့်သက်ဆိုင်သည်။ အချက်အလက်များအရမိသားစုစံပြပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်လိင်ပညာရေး၏အလားအလာစသည့် 'ကြားခံ' များ၏အခန်းကဏ္ intervention သည်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုအတွက်နေရာများဖြစ်နိုင်သည်။ ဒေတာသည်လူမှုရေးမီဒီယာများ (ဥပမာ Instagram) တွင် 'တက်ကြွသော' သို့မဟုတ်ကိုယ်ပိုင်ထုတ်လုပ်သည့် SEM ပုံစံများကိုအသုံးပြုခြင်းကိုရည်ညွှန်းသည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုတီထွင်ခြင်းသို့မဟုတ်လောင်ခြင်း (၃၁) ။ ဒီအိမ်ကြီးထွားလာတဲ့ချဉ်းကပ်ပုံကတကယ့်စိတ်ကူးယဉ်အပြုအမူရဲ့အတွေးအခေါ်တွေကိုဘယ်လိုပြောင်းလဲစေသလဲ Collins 'et al, 29 (5) အသုံးဝင်သောသုတေသနခြုံငုံသုံးသပ်ချက်အရဆိုရှယ်မီဒီယာသည်လူငယ်များမှအွန်လိုင်းလိင်ဆက်ဆံမှုတောင်းဆိုမှုများကိုတိုးပွားစေနိုင်သည်
ဤလေ့လာမှုမှလူငယ်များသည် SEM ထိတွေ့မှုသည်အလွန်အမင်းပါဝင်သောအကြောင်းအရာများပိုမိုလိုအပ်လာခြင်းနှင့်အတူသုံးစွဲမှု၏စွဲလမ်းမှုပုံစံသို့ ဦး တည်သွားနိုင်သည့်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုမြှင့်တင်ခဲ့သည်။ အချို့သောသူများကမူ၎င်းတို့၏နယ်နိမိတ်ကိုတွန်းအားပေးရန်အဆက်မပြတ်တွန်းအားပေးရန်လိုအပ်သည်ဟုခံစားကြရသည်။ အချို့သူများသည်အချို့သောအကြောင်းအရာများကြောင့်တုန်လှုပ်ခြင်းမရှိတော့သောကြောင့်ယခင်သုတေသနတွင်တွေ့ရသောပုံစံ (၃၂၊ ၃၃၊ ၃၄၊ ၃၅၊ ၃၆)၊ အမျိုးသမီးများအားရည်ညွှန်းခြင်း၊ လက်တွေ့မကျသောမျှော်လင့်ချက်များနှင့်လိင်စော်ကားမှုတိုးများလာခြင်း (32) ။
သီအိုရီလမ်းကြောင်း, အားနည်းချက်နှင့်ကြားခံ - လင့်ခ်ပိုကောင်းနားလည်ပါတယ်။
လုလင်တယောက်အုပ်စုတစုအပေါ်အခြေခံပြီး, တိုးမြှင့်အသံအတိုးအကျယ်နှင့် SEM ၏အစွန်းရောက်သောအကြောင်းအရာများကိုပြဋ္ဌာန်းသဘောထားများနှင့်အပြုအမူသို့ဘာသာပြန်ဆိုဖြစ်နိုင်သည်ကိုမည်သို့၏လမ်းကြောင်းအတူတကွ piece မှစတင်ခဲ့သည်ပေမယ့်နောက်ထပ်သုတေသန, SEM သြဇာလွှမ်းမိုးမှုနှင့်ဤအလုပ်ကိုမှလွယ်ကူစွာထိခိုက်၏ပြုပြီစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်သငျ့သညျ။
ယူကေရှိကလေးသူငယ်အင်တာနက်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာကောင်စီနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဌာန၊ မီဒီယာနှင့်အားကစားလမ်းညွှန်ချက်များ (၃၇) မှလူမှုရေးကွန်ရက်နှင့်အပြန်အလှန်အကျိုးပြုသည့် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများကအန္တရာယ်များကိုလျှော့ချရန်နှင့်လူငယ်များအတွက်လုံခြုံစိတ်ချရသောအကြံဥာဏ်များရရှိစေရန်ဆောင်ရွက်ပေးသည်။ မိဘများနှင့်စောင့်ရှောက်သူများ။ ကျောင်းများကိုယ်တိုင်မူလတန်းအရွယ်ကဲ့သို့ငယ်ရွယ်သောကလေးများကြားတွင်အင်တာနက်လုံခြုံမှုကိုပိုမိုတိုးမြှင့်လာကြသည်။
တွေ့ရှိချက်များအရလက်ရှိလိင်ပညာရေး၌အားနည်းချက်များကိုဖြေရှင်းရန်အရေးကြီးပုံကိုမီးမောင်းထိုးပြနိုင်သည် (၂၄) ။ ဤလေ့လာမှုတွင်ပါ ၀ င်သည့်အချက်အလက်များသည်မူလစောင့်ရှောက်သူများ၏သင့်လျော်သောအပြုအမူများ၊ သဘောထားများနှင့်ထင်မြင်ချက်များကိုစံပြပုံစံအဖြစ်ထားရှိခြင်းကိုကျယ်ပြန့်စွာတည်ဆောက်ထားသည့်ဆက်နွယ်မှု (24) ကိုအတည်ပြုသည်။ သို့သော်၎င်းသည်ပိုမိုသုတေသနပြုရန်လိုအပ်သည်။
လိင်ပညာရေး၏တန်ဖိုးကိုလက်ရှိစာပေ (၃၈၊ ၃၉၊ ၂၄) တွင်မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ သင်တန်းသားများသည်သူတို့၏လိင်ပညာရေးကိုယေဘုယျအားဖြင့်မလုံလောက်သော်လည်း SEM ပြcoveringနာကိုမဖော်ပြကြပါ။ ၎င်းသည်အချို့သောလွဲမှားသောအမြင်များနှင့်လူငယ်များရှုပ်ထွေးမှုများကိုကာကွယ်ရန်အခွင့်အလမ်းနည်းပါးသောကြောင့် SEM ကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် SEM ၏အဓိပ္ပာယ်ကိုလမ်းညွှန်ပေးခြင်းဖြင့်အားနည်းခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ထို့အပြင်ထိုကဲ့သို့သောသတင်းအချက်အလက်များ၏အရင်းအမြစ်ယုတ္တိနည်းအွန်လိုင်း (38,39), ရယူထားသောတူညီသောအလတ်စား SEM မှတဆင့်ပိုမိုသုံးစွဲနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဤနယ်ပယ်ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်ပိုမိုသုတေသနပြုရန်လိုအပ်သည်။
တစ်ဦးကစစ်တမ်းကို အခြေခံ. tool ကိုကြီးပြင်းသည့်အကြောင်းအရာများနှင့်တွေ့ရှိချက်များကိုစူးစမ်းဖို့အလားအလာပိုမိုကြီးမားနမူနာအတည်ပြုချက်ကိုလိုအပ် themes များနှင့်အတူယေဘုယျမဟုတ်ကန့်သတ်။ ဒေတာကနေ themes များ၏အနက်ကို reflex အလေ့အကျင့်ထူထောင်ခြင်း, သုတေသီကိုယ်ပိုင်ဘဝအတှေ့အကွုံကလွှမ်းမိုးနိုင်ပြီးတြိဂံဖွဲ့နှင့်အနက်ကိုအတည်ပြုပေးရန်ကြီးကြပ်မှုသုံးပြီးအရည်အသွေးညှဉ်းဆဲခြင်းကို (28) တိုးတက်စေရန်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်သမျှသောနည်းလမ်းများရှိပါသည်။
ဤလုပ်ငန်းသည် SEM ထိတွေ့မှုနှင့်အပြုအမူများနှင့် ပတ်သတ်၍ သီအိုရီများကိုတည်ဆောက်ထားသည့်ယူကေအခြေစိုက်နယ်ပယ်ရှိအရည်အသွေးပြည့်စုံသောသုတေသနဆိုင်ရာသုတေသနနှင့်ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိစာပေများတွင်ကွာဟချက်များကိုဖြေရှင်းရန်စတင်ခဲ့သည်။ SEM ၏ဆိုးကျိုးများကိုလူငယ်များကိုယ်တိုင်ရရှိနိုင်မှုနှင့်အသိအမှတ်ပြုမှုသည်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုလိုအပ်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ အဓိကကြားခံအချက်အလက်များမှအချက်အလက်များသည်ဆယ်ကျော်သက်ကိုယ် ၀ န်ရှိခြင်းနှင့် STI ကာကွယ်ခြင်းဆိုင်ရာသုတေသနတွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသိအမှတ်ပြုခြင်းခံရသည့်အလားအလာရှိသောနည်းလမ်းများကိုအတည်ပြုသည်။ လိင်ပညာရေးနှင့်မိသားစုဆက်သွယ်ရေး။ ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောအန္တရာယ်များကိုပိုမိုသိရှိလာစေရန်နှင့်ထို့နောက်လိုအပ်သောကိရိယာများကိုထောက်ပံ့ပေးခြင်းနှင့်သင့်လျော်သောဘေးကင်းလုံခြုံရေးအစီအမံများကိုအကောင်အထည်ဖော်ခြင်းအားဖြင့်သာလျှင်လူငယ်များသည်သူတို့၏ဘ ၀ အတွေ့အကြုံများကိုစီမံခန့်ခွဲရန်နှင့်အန္တရာယ်ရှိသောအန္တရာယ်မှမိမိတို့ကိုယ်ကိုကာကွယ်ရန်ဖြစ်နိုင်သည်။
Træen B, Toril Sørheim Nilsen, ဟိန်း Stigum ။ အစဉ်အလာမီဒီယာနှင့်နော်ဝေအတွက်အင်တာနက်ပေါ်မှာညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်း။ လိင်သုတေသနများ၏ဂျာနယ်. 2006;43(3):245-247,249-254. http://search.proquest.com/docview/215280373?accountid=14785.
Cooper ကတစ်ဦး, McLoughlin အိုင်ပီ, ကမ့်ဘဲလ် KM ။ ဆိုက်ဘာစပေ့ထဲမှာလိင်: အ 21st ရာစုနှစ် Update ကို။ ဆိုက်ဘာစိတ်ပညာနှင့်အပြုအမူ. 2000;3(4):521-536. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=buh&AN=5323505&site=ehost-live။ Doi: 10.1089 / 109493100420142 ။
Binik YM ။ လိင်နှင့်အင်တာနက်: -only hyp အများကြီး (otheses) အနည်းငယ်ဒေတာ။ လိင်သုတေသနများ၏ဂျာနယ်. 11;38(4):281; 281-282; 282.
Fisher က WA, ဗာရအေကအင်တာနက်ညစ်ညမ်း: အင်တာနက်လိင်အပေါ်တစ်ဦးကလူမှုရေးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရှုထောင့်။ လိင်သုတေသနများ၏ဂျာနယ်. 11;38(4):312; 312-323; 323.
Pamela ပေါလု Pornified ။ ပြည်သူ့ (Chicago.1974). 12;64(11):61; 61.
ပေတရုသည်ဂျေ Valekenburg, ညနေ (2007) လိင်အရာဝတ္ထုအဖြစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာပတ်ဝန်းကျင်နှင့်အမျိုးသမီး၏အယူအဆတွေထိတွေ့ Adolescents ။ လိင် RoLes ။ 56; 381-660 ။
Löfgren-Mårtenson L. တပ်မက်ခြင်း၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်ဘဝ - ဆွီဒင်ဆယ်ကျော်သက်များ၏သဘောထားနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်တွေ့ကြုံမှုများကိုအရည်အသွေးကောင်းမွန်သောလေ့လာမှုတစ်ခု။ လိင်သုတေသနများ၏ဂျာနယ်. 11;47(6):568; 568-579; 579.
McNair ခ Striptease ယဉ်ကျေးမှု: လိင်, မီဒီယာနှင့်အလိုဆန္ဒ၏ဒီမိုကရေစီကူးပြောင်းရေး။ စိတ်ပညာစာနယ်ဇင်း; 2002 ။
Wolak J ကို, Mitchell ကငွေကျပ်, Finkelhor ဃမလိုချင်တဲ့နှင့်လူငယ်များအင်တာနက်သုံးစွဲသူတစ်ဦးကအမျိုးသားနမူနာတွင်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းထိတွေ့ချင်ခဲ့တယ်။ ကလေးအထူးကု။ 2007; 119 (2): 247-257 ။ Doi: 119 /2/ 247 [pii] ။
Mitchell က KJ, Finkelhor: D, Wolak ဂျေအင်တာနက်အပေါ်မလိုချင်တဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းမှလူငယ်၏ထိတွေ့မှုအန္တရာယ်, သက်ရောက်မှုနှင့်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးတစ်အမျိုးသားရေးစစ်တမ်း။ လူငယ်နှင့်လူ့အဖွဲ့အစည်း. 2003;34(3):330-358.
Moreno MA, ပန်းခြံ MR, Zimmerman FJ, Brito TE, Christakis DA ။ မြီးကောင်ပေါက်များက MySpace ပေါ်တွင်ကျန်းမာရေးအန္တရာယ်အပြုအမူတွေ၏ display: ပျံ့နှံ့နေတဲ့နှင့်အသင်းအဖွဲ့များ။ Arch ကလေးမြီးကောင်ပေါက် Med. 2009;163(1):27-34.
စယ် DE ။ ညစ်ညမ်းမိန်းမတို့အားထိခိုက်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ခုနှစ်တွင်: Walsh MR, ed ။ အမျိုးသမီးများ, အမျိုးသားများနှင့်ကျား, မ: လုပ်နေဆဲငြင်းခုံမှုများ။ ယေးလ်: နယူး: ယေးလ်တက္ကသိုလ်ကစာနယ်ဇင်း; 1997: 158-169 ။
ထမင်းစားခန်း, G, Jensen R ကို, Russo အေ ညစ်ညမ်း။ Routledge; 1998 ။
ဆွီဒင်နိုင်ငံတွင်မြီးကောင်ပေါက်အကြားညစ်ညမ်းစားသုံးမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်အကြားHäggström-Nordin အီး, Sandberg J ကို, Hanson ဦး, Tydénတီ (2005) အသင်းမှ။ STD & AIDS ရောဂါ၏နိုင်ငံတကာဂျာနယ်။ 16: 102-107 ။
Kraus SW, စယ်ခအစောပိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများ: အင်တာနက် access ကိုများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းများ၏အခန်းကဏ္ဍကို။ ဆိုက်ဘာစိတ်ပညာနှင့်အပြုအမူ. 2008;11(2):162-168.
ဘရောင်း JD, L'Engle KL ။ X- အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောလိင်မှုဆိုင်ရာသဘောထားများနှင့်အပြုအမူများသည်အမေရိကန်အစောပိုင်းဆယ်ကျော်သက်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာထင်ရှားသောမီဒီယာနှင့်ထိတွေ့မှုနှင့်ဆက်စပ်သည်။ ဆက်သွယ်ရေးသုတေသန. 2009;36(1):129-151.
Braun-Courville DK, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာက်ဘ်ဆိုဒ်များနှင့်ဆယ်ကျော်သက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားများနှင့်အပြုအမူမှ Rojas အမ် Exposure ။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကနျြးမာရေး၏ဂျာနယ်. 2009;45(2):156-162.
Luder M က, Pittet ငါ Berchtold တစ်ဦးက, Akréကို C, Michaud P ကို, Surísဂျေအသင်းအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအကြား: သွန်သင်ချက်အမှားသို့မဟုတ်အဖြစ်မှန်? Arch လိင်ပြုမူနေ. 2011;40(5):1027-1035.
Ybarra ML, Mitchell က KJ ။ ကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်အကြားအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှ Exposure: တစ်ဦးကအမျိုးသားရေးစစ်တမ်း။ Cyberpsychology & အပြုအမူ. 2005;8(5):473-486.
Collins RL Martino က SC, ဆယ်ကျော်သက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအပေါ်သစ်ကိုမီဒီယာကို Shaw R. သြဇာလွှမ်းမိုးမှု: အထောက်အထားများနှင့်အခွင့်အလမ်းများကို။ RAND ကော်ပိုရေးရှင်းက။ 2011 ။
Alexis EM, Burgess AW, Prentky RA ။ လိင်ကတုံ့ပြန်ကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်အကြားအပြုအမူတစ်ခုရန်လိုပုံစံများအတွက်အန္တရာယ်အမှတ်အသားအဖြစ်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်း။ J ကို Am Psychiatric သူနာပြုများ Assoc။ 2009; 14 (6): 442-453 ။ Doi: 10.1177 / 1078390308327137 [Doi] ။
Tsitsika တစ်ဦးက, Critselis အီး, Kormas, G, Konstantoulaki အီး, Constantopoulos တစ်ဦးက, Kafetzis ဃဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ညစ်ညမ်းအင်တာနက်စာမျက်နှာကိုအသုံးပြုခြင်း: ကိုအသုံးပြုခြင်း၏ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်အချက်များနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုတစ် multivariate ဆုတ်ယုတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ ဆိုက်ဘာစိတ်ပညာနှင့်အပြုအမူ. 2009;12(5):545-550.
။ ပတေရုသ J ကို, Valkenburg pm တွင် (2010) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအင်တာနက်ပစ္စည်းမြီးကောင်ပေါက် '' အသုံးပြုမှုများ၏သက်ရောက်မှုအခြေခံ process လုပ်တယ်: ရိပ်မိသရုပ်မှန်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍ။ ဆက်သွယ်ရေးသုတေသန. 2010;37(3):375-399.
ဘရောင်း J ကို, Keller က S, Stern ပာအက်စ်လိင်, လိင်, sexting နှင့် sexed: ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းနှင့် media.prevention သုတေသီ။ ကာကွယ်တားဆီးရေးသုတေသနပညာရှင်. 2009;16(4):12-16.
Malamuth မိုင်, Addison T က, Koss အမ်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်: အဲဒီမှာယုံကြည်စိတ်ချရသောဆိုးကျိုးများရှိပါသလားနှင့်ငါတို့သည်သူတို့နားလည်နိုင်သလဲ Annu ဗြာလိင် Res. 2000;11(1):26-91.
Strauss A၊ Corbin J. အခြေခံသုတေသနအရည်အသွေးအခြေခံ - သီအိုရီကိုတည်ဆောက်ရန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်နည်းစနစ်များ။ 1998 ။
စိတ်ပညာအကြောင်းအရာအလိုက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအသုံးပြုခြင်း Braun V ကို, Clarke V. ။ စိတ်ပညာအတွက်အရည်အသွေးသုတေသန. 2006;3(2):77-101.
Meyrick ဂျေကောင်းသောအရည်အသွေးသုတေသနကဘာလဲ? ညှဉ်းဆဲခြင်းကို / အရည်အသွေးမြင့်မှုကိုစီရင်ရန်ပြည့်စုံချဉ်းကပ်မှုဆီသို့ဦးတည်တစ်ဦးကပထမဦးဆုံးခြေလှမ်း။ J ကိုကနျြးမာရေး Psychol။ 2006; 11 (5): 799-808 ။ Doi: 11 /5/ 799 [pii] ။
အွန်လိုင်းလိင်၏ Cooper ကတစ်ဦး, Griffin-Shelley အီးတစ်ဦးအမြန်ခရီးစဉ်: အပိုင်း 1 ။ အမေရိကန် Psychotherapy အသင်းရာဇဝင်. 2002;5(6):11-13.
ပေတရုသည်ဂျေ Valekenburg, ညနေ (2006) အင်တာနက်အပေါ်တစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းထိတွေ့ခြင်း Adolescents ။ ဆက်သွယ်ရေးသုတေသန။ 33 (2); 178-204 ။
Subrahmanyam K ကို Greenfield pm တွင်, Tyne ခအွန်လိုင်းမှဆယ်ကျော်သက်ချက်တင်ခန်းထဲမှာလိင်နဲ့ဝိသေသလက္ခဏာတည်ဆောက်ခြင်း။ အသုံးချဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာစိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်. 2004;25(6):651-666.
မြီးကောင်ပေါက်အကြားအင်တာနက်စွဲလမ်းနှင့်ဆက်စပ် lam LT, Peng က Z ကို, မိုင်း J ကို, ဂျင်ဂျေအချက်များ။ ဆိုက်ဘာစိတ်ပညာနှင့်အပြုအမူ. 2009;12(5):551-555.
Delmonico DL, Griffin EJ ။ ကျဘာနှင့် E-ဆယ်ကျော်သက်: အဘယ်အရာကိုလက်ထပ်ထိမ်းမြားနှငျ့မိသားစုကုသကိုသိသင့်ပါတယ်။ J ကိုအိမ်ထောင်ရေး Fam Ther. 2008;34(4):431-444.
ဗန် Den Eijnden, Regina JJM, Spijkerman R ကို, Vermulst AA ကို, ဗန် Rooij တီဂျေ, အိန်ဂျယ် RC ။ Bidirectional မိဘကလေးဆက်ဆံရေး: မြီးကောင်ပေါက်အကြား compulsive အင်တာနက်အသုံးပြုခြင်း။ J ကိုပုံမှန်မဟုတ်သောကလေး Psychol. 2010;38(1):77-89.
Rimington DD, Gast ဂျေကျဘာအသုံးပြုခြင်းနှင့်အလွဲသုံးစားမှု: ကျန်းမာရေးပညာရေးအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှု။ ကနျြးမာရေးပညာရေး၏အမေရိကန်ဂျာနယ်. 2007;38(1):34-40.
ပတေရုသ J ကို, Valkenburt pm တွင်။ (၂၀၀၈) ဆယ်ကျော်သက်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရအင်တာနက်ပေါ်ရှိအကြောင်းအရာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမသက်ဆိုင်သောအရာများနှင့်ထိတွေ့ခြင်း - သုံးလှိုင်း panel လေ့လာမှု။ မီဒီယာစိတ်ပညာ. 06;11(2):207; 207-234; 234.
ယဉ်ကျေးမှု, မီဒီယာနှင့်အားကစားဌာန။ ကလေးသူငယ်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုအွန်လိုင်း: လူမှုရေးမီဒီယာနှင့်အပြန်အလှန်န်ဆောင်မှုများပံ့ပိုးပေးဘို့တစ်ဦးကလက်တွေ့ကျတဲ့လမ်းညွှန်။ ။ 2016 ။
အီဗန် AE, Edmundson-Drane EW, Harris က KK ။ ကွန်ပျူတာ-ကူညီညွှန်ကြားချက်: HIV ကာကွယ်တားဆီးရေးပညာရေးအတွက်ထိရောက်တဲ့သင်ကြားပို့ချနည်းလမ်း? ဆယ်ကျော်သက်ကျန်းမာရေးဂျာနယ်. 2000;26(4):244-251.
Owen EW, Behun RJ, Manning JC, ရိဒ် RC ။ မြီးကောင်ပေါက်ရက်နေ့တွင်အင်တာနက်ညစ်ညမ်း၏သက်ရောက်မှု: အသုတေသနတစ်ဦးကသုံးသပ်မှု။ လိင်စွဲခြင်းနှင့်ထိုးဖောက်ခြင်း. 2012;19(1-2):99-122.